Ndiri kurasikirwa nemari: chii chandingaite? | Ehupfumi Zvemari
Saka kuti izvo zvakaitika kwauri mugore rapfuura zvisaitike zvakare, isu tiri kuzokupa iwe mamwe maitiro ehunhu kuti iwe uzive zvekuita kana yako portfolio yekudyara mumusika wemasheya iri mune yakaipa mamiriro. Muna 2018, iyo yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35, yaive zvishoma zvinopfuura 15%, ine hunhu hwakadonha pamusoro pe30%, senge ihwo hunobva kubhengi. Ichi chinhu chausingakwanise kubvumira iyi nyowani yemusika wemusika kosi.
Dambudziko guru rekurasikirwa nemari mumisika yemari ndeyekuti zvinhu zvinogona kuwedzera. Ichi chinhu icho vatengesi vane ruzivo rwakanyanya mumisika yemari vanonyatso ziva nezvazvo. Nekuti ivo vanogara vaine mhosva yekuita kuti mamiriro ako awedzere. Zvakare, iwe haugone kukanganwa kuti kuderera kunotungamira mukudzikira kwakanyanya mukukoshesa kwemasheya. Uye iwe hauzove neimwe sarudzo kunze kwekucheka iyi mamiriro inokuvadza kune zvako zvaunofarira.
Kune rimwe divi, hatigone kukanganwa kumwe kufungidzira kunoratidza kuti a kushaya mari padanho repasirese iro rinogona kukanganisa zvakanyanya misika yequity yepasi rose. Mupfungwa iyi, ongororo yeNew York Times inoratidza kuti inopfuura hafu yevakuru vakuru vakabvunzwa vanofungidzira kuti kuchave nekuderera kwehupfumi panopera gore ra 2019. Zviri pachena kuti kwemwedzi vamwe vakayambira pamusoro pekuderera kwehupfumi, asi nyanzvi zhinji hadzi inotarisirwa kuitika kusvika hafu yechipiri ya2019 kana 2020.
1 Kurasikirwa pamusika wemari: kutengesa
2 Tora mukana wemisangano yekutengesa
3 Ita shanduko mukati mehombodo
4 Kubata zvinzvimbo riini?
5 Kunonoka hongu, kuderera kwemari kwete
6 Kupera kweQE
Kurasikirwa pamusika wemari: kutengesa
Imwe yemaitiro ekutanga anogona kugadzikana mumabasa emusika wekutengesa kuita maodhi ekutengesa. Iyo inoshanda kwazvo sisitimu kana ikaitiswa pamberi, ndiko kuti kana misika yemakambani yatanga kuderera. Zvirinani kuitisa nenguva pane kumirira urema hunowedzera nekufamba kwemazuva. Haufanire kunetseka nekurasikirwa nemari shoma, asi zvinonyanya kunetsa ndezvekuti iwe siya mari dzakakosha kwazvo munzira munzira dzekudyara idzi.
Kuisa zano iri mukudyara kuri nyore mumatemu mapfupi ekugara nekuti izvo zvauri kutsvaga kukurumidza kushanda, mune imwe pfungwa kana imwe. Chimwe chinhu chakasiyana kwazvo chiri mune yepakati nepakareba mazwi apo zvakanyanya kuomarara kumisa kurasikirwa uku. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi. Unogona kushandisa chishandiso chine simba uye chinoshanda seiyo mira kurasikirwa mirairo. Hazvishamise kuti ivo vanozokubatsira iwe kudzikisira ivo kumatanho ayo hupfumi hwako hwemumba hunogona kutsigira panguva imwe neimwe.
Tora mukana wemisangano yekutengesa
Chero zvazvingaitika, kana iwe wakatsunga kutengesa nzvimbo dzako pamusika wemasheya, zano rakanakisa raunotora kubva ikozvino kumirira kuti zviitike. yakasimba rebound mune iyo quote. Neiyi nzira, hapana mubvunzo kuti iwe unozokwanisa kudzikisa kurasikirwa uye zvirinani kuti kutengesa kwacho kuchakuvadza zvakanyanya kune zvako zvaunofarira. Iyi ndiyo imwe yemabhenefiti akakura anounzwa neako kutaridzika kwezvakakurumbira rebound mumusika wemusika. Izvo hazvishandisirwe kutenga, asi zvakapesana, zvishoma nezvishoma kugadzirisa zvigaro uye zvichienderana nezano rekutengesa rauri kushandisa panguva iyoyo.
Kune rimwe divi, kuti utengese mumafambiro aya, ari iwo mabhureki, iwe unofanirwa kuisimbisa muchikamu chepamusoro chekugadziriswa kwemutengo. Ndokunge, iwe unofanirwa kukurumidza kumuka kunoitika panguva idzodzo. Nekuti rebound inogona kutora maawa mashoma kwazvo kana kupedzisira yaenderera mberi kwevhiki dzinoverengeka. Ehezve, iri chikamu chakaomesesa cheichi chiitiko. Ziva chii chinonzi yakanyanya mukana nguva yekutengesa nzvimbo dzako mumisika yemari. Izvo hazvisi nyore kuti iwe uende pamusoro pebhureki nekuti mhedzisiro inogona kuve yakapesana uye ichi chinhu chinogona kukukuvadza zvakakomba.
Izvo zvinokurudzirwawo zvikuru kuti iwe urege kutorwa nezvishuwo uye uwane nguva yekuongorora zvakakunakira iwe pane imwe nhambo. Sarudzo dzakakurumidza harisi bhizimusi rakanaka kune vashoma uye vepakati varimi. Zvirokwazvo ndechimwe chinhu chawakasimbisa mukuita kwawakaita makore apfuura. Icho chiitiko chaunogona kubatsirwa kubva ikozvino zvichienda mberi. Nekuti haugone kukanganwa kuti mari zhinji iri panjodzi uye zvirokwazvo haisi nguva yekuita zvikanganiso zvakawandisa mumhando iyi yekushanda kwemari.
Ita shanduko mukati mehombodo
Kana iwe ukaona kuti kukosha kwemusika uko iwe kwawakaiswa pane imwe nguva kunorasikirwa zvakanyanya mumisika yezvemari, unogona kuita kuchinjisa kwenzvimbo kune vamwe vane mashandiro ari nani mumisika yemari. Izvi zvinofanirwa kuitwa kana iwe wakamira pane kukosha zvakajeka bearish uye iwe unoona kuti kune vamwe vanoratidzira zvakapesana zvakasiyana maitiro. Ndokunge, ivo vanotongwa nedenga rekumusoro rinokutendera iwe kuti kuchengetedza kunobatsira pamwe nezvivimbiso zvakakura zvekubudirira.
Kukanganisa chete kweiri zano rakakosha nderekuti hapana chaunogona kuita kunze kwekutora yakakwira mari kune makomisheni ekushanda kwe tenga utengese. Sezvo iwe uchafanirwa kuzviita, zvese kana uchivhara nzvimbo mune yekutanga yemasecurity uyezve mune chitsva chikumbiro chawakasarudza kugadzirisa kurasikirwa kwawaive nako kune ako ekuchengetedzwa portfolio. Chero zvazvingaitika, hazvizove zvakanyanyisa kubhadharwa kana mupiro wako wezvemari une simba chairo. Chero nzira, uchafanirwa kukoshesa mashandiro kuti usanetse zvinhu mumisika yemari.
Kubata zvinzvimbo riini?
Chimwe chezviitiko chingamuka ndidzo zvikonzero zvaunazvo panguva ino zvekusasiya nzvimbo dzako pamusika wemari. Kana paine kurasikirwa mune chirevo chemari yekuchengetedzeka kwako. Chimwe chezvikonzero chekutora matanho aya ndechekuti nguva yako yekugara yakanangana nharaunda uye pamusoro pezvose kwenguva refu. Nekuti zviripo, mune izvi zviitiko iwe haufanire kunetseka pamusoro pemusika wemasheya unodzika, kunyangwe kana uri pasi pekusimba kukuru. Kwete pasina, nguva yako yekugara inogona kukutendera aya madonhwe mumutengo.
Kune rimwe divi, kana iyi iri mamiriro ekuti mari dzinoiswa kwauri, unogona kutora mukana wekudzikira mumitengo yemitengo kuwedzera nzvimbo dzako zvakaenzana. Uyu muenzaniso uyo unotonyanya kubatsira mumitengo kupfuura vanogovera zvikamu pakati pevashandi vayo. Nekuti iwe unogona kuwana yakatarwa uye yakavimbiswa kudzoka gore rega rega iro rakakwira kupfuura nakare. Hazvishamisi kuti izvi ndizvo zvinoitwa nemakambani pachavo kuti vawane homwe ine simba yakawanda kwazvo kupfuura nakare kose. Kutenga masheya pamitengo inodhura zvakanyanya.
Kunonoka hongu, kuderera kwemari kwete
"Nzvimbo yepamusoro yekutenderera iri mumashure medu, asi matanho akasimba echiitiko anoramba aripo, achitungamirwa nenyika dzichiri kusimukira uye nekutsigirwa nemamiriro ezvinhu emari akanaka", vanodaro vaongorori veRenta 4 Las emerging economy ichaenderera, mu2019, kuti vawedzere huremu hwavo muGDP yenyika. Kana tikataura nezve nyika dzakasimukira, iyo Income Analysis 4 Banco timu inofungidzira kudzikira kudiki kunotungamirwa nekudzika kwakadzika muUS, kana kukanganisa kwemutero kuchinge kwasara kumashure. MuEurope, pfungwa yekutarisisa ichave pane hurukuro dzeBrexit nemhedzisiro yazvo.
Kana zviri zveSpain, mu2019 inoramba iri pamusoro weEurope maererano nekukura, asi ichirasikirwa nesimba zvichienzaniswa negore rapfuura. Aya mamiriro, eane mwero mukukura mwero ne inflation inodzorwa, inobvumidza maitirwo emari emabhanga makuru eCentral kuti arambe achigadzirisa zvishoma nezvishoma. Iyo Fed inoswedera padanho risingapindiri yemitengo, kunyange ichikwanisa kudzora kukwira kana paine kudzikira kwakanyanya.
MuEurope, iyo ECB inotarisirwa kumisikidza zvishoma nezvishoma chimiro mukutarisana nekukura zvine mwero, zvine inflation uye njodzi dzezvematongerwo enyika senge, semuenzaniso, Italy. Nenzira iyi, kupera kweQE (kuwanda kwekurerutsa) kunofanirwa kuve kwemwedzi waZvita 2018 uye tinogona kuona kukwira kwekutanga kwemitero muzvikamu zvekupedzisira zve2019, sekufungidzira kwakaitwa neRenta 4 Banco vaongorori. Chero zvazviri, iwo misoro iwe yaunofanirwa kuongorora uye kunyanya kufunga kubva kune aya chaiwo nguva.
Nezve Bhanga reEngland, "isu tinongofanirwa kumirira kuti tione mhedzisiro yeBrexit pakukura uye inflation," nepo Bhanga reJapan richichengetedza, kwenguva ino, mutemo wekuwedzera wezvemari. Mune ino mamiriro akawandisa emisika yemari, zvese kuenzana uye mari yakatarwa, hakuzove nesarudzo kunze kwekuterera kwazvo kune dzese nhau dzinounzwa nezviitiko zvakakosha kwazvo mugore rino razvino. Kusvika padanho rekuti zvichabatsira zvakanyanya kuitira kuti iwe ugone kuita sarudzo dzako mumisika yemakambani kubva ikozvino zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ndiri kurasikirwa nemari: chii chandingaite?
Iyo Ibex 35 ingangoita pamapoinzi mazana mapfumbamwe nemazana matanhatu, zvino chii?